वास्तवमा बुटीक महंगो हुँदैन » Enavanari
वास्तवमा बुटीक महंगो हुँदैन
भारतमा बुटीक सम्बन्धि तालिम लिई नेपालमा आएर आफ्नो यावसायमा सक्रीय रुपमा लागिपरेकी बुटीक डिजाइनर हुन् स्मृती बिष्ट । विगत चार वर्षदेखी यस पेशामा सक्रीय रहेकी छन् उनी । ललितपुरको कुमारी पाटीमा चुनरी नामक बुटीक सञ्चालन गरिरहेकी स्मृती आफ्नो सानै देखीको रुची पुरा भएको बताउछीन् ।
तपाईं बुटीक व्यावसायमा कसरी लाग्नु भयो ?
मेरो सानै देखीको रुचीको विषय हो बुटीक व्यावसाय । सानै देखी अरुको भन्दा फरक खालका कपडा लगाउन मनपराउने भएकाले यस क्षेत्रमा लागेकी हुँ । सुरुमा
भारतमा गएर दुई वर्षको कोर्ष लिएर अध्ययन गरे र पछी नेपाल आएर सानो स्केलमा मैले यस व्यावसायलाई अगाडी बढाएकी हुँ । हाल दुई वर्ष अघिदेखी
मात्र मैले केहि लगानी बढाएर चुनरीको स्थापना गरेकी हँु ।
बुटीकमा तयार पारेको कपडा महंगो हुन्छ भन्छन् नि ?
खासै महंगो भन्न मिल्दैन । मेहनत धेरै गर्नु पर्ने र बुटीकको डीजाइनहरु एक पीसमात्रै बनाउनु पर्ने, कालिगढहरुको ज्यालानै महंगो भएकाले थोरै मात्रामा महंगो भएको हो । समग्रमा हेर्दा यसलाई महंगो भन्न मिल्दैन । बजारमा हाल रेडिमेट कपडा नै कति महंगो छ । क्वालिटिमा कम्प्रमाइज गरिएको हुँदैन । अर्को तिर बुटीकमा बनाएको कपडा आफ्नो डिजाइनमा बनाउन पाइयो र आफुलाई फिट हुने, आफुलाई मन परेको बुट्टा मुजा बनाउन पाइने भएकाले नै थोरे महंगो भएको हो ।
रेडिमेड र बुटीकमा बनाइएको कपडामा फरक के हुन्छ ?
रेडिमेड कपडा आफुले रोजे जस्तो खोजे जस्तो पाइदैन, पाइहाले पनि पैसा हालेर किनिसकेपछि यसको क्वलिटि थहाँ हुंँदैन र आफ्नो शरिरमा फिट पनि हुँदैन । तर बुटीकको कपडा आफु्ले चाहेको कलर, चाहेको बुट्टा, चाहेको साइजमा तयार पार्न सकिन्छ र यो केवल एकपीस मात्रै बनाइएको हुन्छ त्यसैले
अरुभन्दा फरक देखिन्छ ।
चुनरी बुटीक अरुभन्दा के मा फरक ?
हामी जहिले पनि अलि फरक कलरको कपडा बनाउने गर्दछौ र अन्य डिजाइनसँग नमिल्ने डिजाइन गर्दछौ । अन्य ठाउँहरु भन्दा केहि सस्तो पनि छ चुनरी बुटीक ।
अब यसैलाई अझ व्यावस्थीत गरेर लाने र छिटै बुटीक सम्बन्धी टे«निङ्
सेन्टर खोल्ने सोच छ भने चुनरीको शाखा खोल्ने योजना छ ।
प्रस्तुति ः चक्र प्रसाद पोख्रेल